နံရံကြွေပြားကွာခြင်းကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့်အဆင့် ၅ ဆင့် | Weber Cambodia
နံရံ ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်းနှင့် ကြံခိုင်မှုတိုးမြင့်ခြင်း ပြုလုပ်နည်း လုပ်ဆောင်ချက်များ
ဂရနီတိုကြွေပြားများနှင့် ၂'x၂' ပတ်လည်ကြွေပြားများအား လှပအောင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် ခင်းကျင်းခြင်း
နံရံကြွေပြားကွာခြင်းကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့်အဆင့် ၅ ဆင့်
နံရံများအက်ကွဲခြင်း ကွာထွက်ခြင်းသည် ပုံမှန်ဖြစ်နေကြပြဿနာများပင်ဖြစ်သည်။ လူအများသည်ဆေးကွာနေသောနံရံကိုတွေ့သောအခါ ဆေးအဟောင်းအားခွာထုတ်၍ ဆေးအသစ်ပြန်သုတ်ရန် ကြိုးစားလေ့ရှိသည်။ ယခုအခါ weber သည်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်သည်ကို ထုတ်ဖော်တင်ပြလိုက်ပါသည်။
ဆေးသုတ်သမား ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်း။ တချို့ဆေးသုတ်သမားများသည် အလုပ်မြန်မြန်ပြီးစေရန် လုပ်ဆောင်ရမည့်အဆင့်များကိုလျော့ချလိုက်ခြင်းကြောင့် စံနှုန်းမမီသော ရလဒ်ကိုထွက်စေပါသည်။
• ပြင်ပ ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် စိုထိုင်းဆ ရာသီဥတုပေါင်းလဲမှုတို့ကြောင့် နံရံကိုပူနွေးစိုစွတ်စေကာ ကျုံ့ခြင်း ဆန့်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေကာ အက်ကြောင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
• မှန်ကန်သော ပစ္စည်းများ သုံးစွဲမှုမရှိခြင်း။ နံရံများသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ်ကို အမြဲခံစားနေရသောကြောင့် ကျုံ့ဆန့်နိုင်စွမ်းမြင့်မား၍စွဲကပ်အားကောင်းမွန်သော ပစ္စည်းများကိုသာ ရွေးချယ်သင့်ပေသည်။
နံရံကြွေပြားကွာခြင်းပြဿနာကို weber.base skim coat ကိုအသုံးပြုဖြေရှင်းနိုင်ပါသည် ၄င်းထုတ်ကုန်သည် မျက်နှာပြင်ကို ချောမွတ်စေ၍ စွဲကပ်အားကောင်းမွန်ကာ ကျံု့ခြင်းနှင့် တိုက်စားမှုဒဏ်ခံနိုင်သော ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။
ေၾကြျပား ကြာျခင္းသည္ တခါတရံက်ဥ္းေျမာင္းေသာဧရိယာတြင္ပါ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ ဘာေၾကာင့္ထိုျပႆနာျဖစ္ေပၚလာရပါသနည္း? ထိုျပႆနာအတြက္ အေျဖရွာၾကည့္ၾကပါစို႔။
ထို့ကြောင့် Weber မှပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် နံရံကြွေပြားကွာခြင်းမှကာကွယ်ရန် weber.tai flex ကျုံ့ဆန့်နိုင်စွမ်းမြင့်မားသော ကြွေပြားကပ်ကော် နှင့် weber.color outside ကျံု့ဆန့်နိုင်သော နှာကြောင်းဖြည့်ကော်တို့ကိုအသုံးပြု၍ လွယ်ကူသော အဆင့် ၈ ဆင့်ဖြင့်အသုံးပြုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
1. မျက်နှာပြင် ပြင်ဆင်ခြင်း- အက်ကွဲ၍ ကွာထွက်နေသောကြွေပြားအဟောင်းများကို ဆောက်ဖြင့်ထွင်းထုတ်ပြစ်ပါ။ မျက်နှာပြင်အား ညီညာမှု မာကျောမှု ချောမွေ့မှုရှိ မရှိ စစ်ဆေးပါ။
2. ကြွေပြားပြင်ဆင်ခြင်း-ကြွေပြားကို အမှိုက် ဖုန် အညစ်အကြေးတို့မရှိအောင် သန့်ရှင်းပေးပါ။ ကြွေပြားကို ရေစိမ်ခြင်းမလုပ်ရပါ။
3. Weber.tai flex ကျံု့ဆန့်နိုင်စွမ်းမြင့်မားကာ စွဲကပ်အားကောင်းမွန်ပြီး ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော အရည်အသွေးမြင့်ကြွေပြားကပ်ကော် ကိုရွေးချယ်ပါ။
4. Weber.tai flex ကြွေပြားကပ်ကော်ကို သင့်တော်သောပမာဏအတိုင်း ထောင့်မှန်ကျနံရံပေါ်တွင် သုတ်လိမ်းပေးပါ။5. Weber.color outside ကိုအသုံးပြု၍ နှာကြောင်းဖြည့်ပါ။ ကြွေပြားကပ်ကော်ကို ခြောက်အောင်စောင့်ပေးပါ။
6. ကြွေပြားတချပ်နှင့်တချပ်ခြား နှာကြောင်းအကျယ် ၃-၁၂ မီလီမီတာခန့်ထားပေးပါ။
7. ၆၀ စတုရန်းမီတာနှင့်အထက်တိုင်း ၅-၆ မီလီမီတာရှိသော လှုပ်ရှားနိုင်သောအဆက် အဖြစ်ထားပေးကာ ထိုအဆက်ထဲသို့ ဆီလီကွန်ကော်ကို ထည့်ပေးပါ။
8. ကြွေပြားထောင့်နေရာတိုင်းနှင့် တိုင်နေရာများ မတူညီသောမျက်နှာပြင်တို့ဆုံသောနေရာများတွင် ၅-၆ မီလီမီတာအကျယ်ရှိ ဆက်ကြောင်းထား၍ ၄င်းဆက်ကြောင်းကို အထူးဖော်စပ်ထားသော ဆီလီကွန်ကော်ထည့်ပေးပါ။
နံရံကြွေပြားပြဿနာသည် ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်ဘဝနှင့်သက်ဆိုင်လျက်ရှိသည်။ ကောင်းမွန်သော ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းများကိုသာရွေးချယ်၍ အနာဂတ်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောပြဿနာများကို ကြိုတင်ကာကွယ်လိုက်ပါ။
ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်းနှင့် ဓာတုဗေဒ အသုံးချချက်များ